Roobab dabeylo wata oo laga baqayo inay ka da’aan Goboladda Waqooyi iyo Bariga Soomaaliya. – Madal Furan
Hoy > Warka > Roobab dabeylo wata oo laga baqayo inay ka da’aan Goboladda Waqooyi iyo Bariga Soomaaliya.
Roobab dabeylo wata oo laga baqayo inay ka da’aan Goboladda Waqooyi iyo Bariga Soomaaliya.
Editor September 26, 2018 0
Madal Furan – Roobab dabeylo wata ayaa saadaasha hawadu sheegtay inay ku soo wajahan yihiin deegaamo ka tirsan gobolada Waqooyi ee Soomaaliya; gaar ahaan Somaliland.
Wasiirka wasaarada beeraha ee Xukuumadda Somaliland Axmed Muumin Seed oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in laga cabsi qabo in roobab dabeylo wata iney ku soo wajahan yihiin deegaamo ka mid ah Somaliland gaar ahaan dhulka xeebaha u dhow.
Roobabkan ayaa la saadaalinayaa inay si weyn uga da’I doonaan dhulka ku teedsan xeebaha ee Puntland iyo Somaliland, waxaana cabsi laga qabaa inay dabaylaha roobabkaasi ay wataan ay waxyeelo u geysan karto gaadiidka badda ee kalluumeysatadu isticmaalaan.
Dhulka Dooxooyinka ah iyo baliyada ee daadadku ku rogmadaan ayaa si weyn loogaga digayaa in ay feejignaan dheeraad ah yeeshaan, kana gaashaantaan in iyaga iyo xoolahooduba aysan dhibaato ka soo gaarin haddii ay da’aan roobab dabeylo wata.
Sida ay sheegayaan qolyaha ku taxaluqa saadaasha hawadda ayaa sheegaya in roobabkan xoogoodu uu imnaan karo bilaha Oktoobar iyo November ee sanadkan, balse awooda Rabbi iyo qorshihiisa ayaa ah mid siduu doono uu u maamulo.
Sawiro:- Madaxweyne Deni oo dhegaha ugu riday masuuliyiinta ammniga Gobolka Bari in xilka laga qaadi doono.
Dagaal maanta dib uga curtay deegaanka Ceel Afweyn iyadoo Muuse Biixi uu baajiyey socdaalkii uu ku tegi lahaa dhulkaas
DFS oo shaacisay inay soo dhoweynayaan qorshaha Muuse Biixi ku ogolaaday wadashaqeyn dhow.